Gabaasa Komishina Mirga Dhala Namaa Itiyoophiyaa
Waxabajjii 13, 2016
Loogoo Koomishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa
Mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti tarkaanfiin humnootiin fudhatame kan wal gituu fi kan ta’uu qabu ture jechuun komishinni mirga dhala namaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dura ta’aa komishinichaa kan ta’an Dr. Addisuu Gabre Egiziyaabheer akka jedhantti lakkofsi namoota ajjefamanii 173 yoo ta’uu kanneen keessaa 14 miseensoota humna nageenyaa kanneen biroon 14 immoo miseensoota hoggana mootummaa turan jedhu. Jeequmsa dhaqqabe ittisuuf Raayyaan ittisaa, polisiin Federaalaa, polisoonni nannoo fi milishoonni seenanii ituu hin tasgabbeesine ta’e balaa kana caalaatu dhaqqaba ture jedhan. Qorannaan kunis of-eeggannaa guddaan qaama dhimmi ilaaluu haasoofsisuun qophaa’uu isaa Obbo Addisuun hubachisanii jiru.
Mararaa Guddinaa, dura ta’aa paartii Kongreesii Federaalawaa Oromoo
Gama kaanii dura ta’aa paartii Kongreesii Federaalawaa Oromoo kan ta’an Dr. Mararaa Guddinaa komishinni gabaasa kana qopheesse walaba waan hin taaneef mootummaa irraa itti gaafatama kaasuuf kan hojjatame jedhu. Akka paartiin keenya beekuutti kanneen Oromiyaa keessatti mormii gaggeffameen ajjefaman 350 ol ta’u jedhanii, qabsaa’onni 500 jedhanis ni jiru jedhu. Mootummaan haala Oromiyaa keessatti dhalateef sababaan dhabamuu bulchiinsa gaarii ti jechaa amma immoo komishinni kun humnootii adda addaa jechuun maqaa dhahuun wal faalleessa jedhu. Ammas taanaan dhimmi kun qaama walaba ta’een akka qoratamuu gaafanna jedhu Dr Mararaa Guddinaa.
Gama kaaniin eenyuummaa saba Qimaant kan ilaaleen dhimmi yeroo gabaabaa keessatti deebii argachuun irra ture waggaa 6 lafa irra harkifamuu fi polisoota 2 dabalatee lubbuun nama 87 dhabamuun sirri miti jechuun mootummaan bulchiinsi Amaaraa uummata dhiifama akka gaafatuuf koreen kun gaafatee jira.
Gurmnuuleen Ameerikaa fi Awurooppaa Dhiheenya Itiyoophiyaatti Hoogganoota Mormitootaa Oromoo Dubbisan Moo?
Oromiyaa Keessatti Dhiheenya kana Namoota 2,600 Ol Tu Seeraa Ala Hidhamee Jira, Jedha MEDREK
Godinaa Guujii Keessatti Namoonni Hedduun Hidhaman Jedhu Jiraattonni
Magaalaa Finca’aatti Poolisoonni Barsiisotaa fi Namoota Ka Biroo Hidhan Mana-murtiitti Dhiheessuu Didan
Himannaan Shororkeessummaa Beqqelee Garbaa fi Namoota Biroo Oromiyaa Keessaa Irratti Dhihaate Na Yaaddesse, Jetti Yunaayitid Isteets
Mormii Oromiyaa Keessaa Irratti Tokkummaan Uummatni Oromoo Agarsiise Dhaabota Siyaasaa illee Walitti Fide
Tarkaanfii Humnaa Mootummaan Oromiyaa Keessatti Fudhateef Kan Gaafatame hin Jiru: Gamtaa Medirek
Ministeera Barnoota Itiyoophiyaa: Qorannaa Oromiyaan Gaggeesseetu Lafa Qormaanni Itti Kennamuu Danda’uu fi Turfamuu Qabu Murteesise
Yeroon Qormaataa Akka Dheeratuuf Gaafatan Barattoonni Oromiyaa Sababaa Amansiisaa Qabu: Professer Beyyenee Peexroos